Wed, Sep 30, 2020 | 00:57:16 NST
प्रश्न : मेरो मलेसियाका लागि भिसा आएको थियो । तर म आफ्नै कारणले मलेसिया जान सकिन । मैले म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँ बुझाएको थिएँ त्यो पैसा फिर्ता पाउँछु कि पाउँदिन ? उत्तर : राजेन्द्र भण्डारी, सचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संध – द"तावासले पासपोर्ट स्ट्याम्प लगाइसकेको छ भने म्यानपावरले द"तावासलाई भिसा क्यान्सलेसन वापत रु ३ हजार ९ सय तिर्नु पर्छ । श्रम स्वीकृती र अभिमुखिकरण तालीममा रु ५ हजार लाग्छ । म्यानपावरले आफ्नो खर्च भर्पाइको लागि उक्त रकम नफर्काउन पनी ...
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुदा बिमा रकम पाइन्छ ?
प्रश्न : मेरो साथी मलेसिया गएको थियो गएको आठ महिना पछि भदौ ६ गते उसको मृत्यु भएको थियो । अब त्यस कम्पनीबाट क्षतिपुर्ति पाइन्छ पाइदैन ? उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - अहिले सम्म वैदेशिक रोजगारमा जती पनी जानु भएको छ, उहाँहरुको हकमा कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको मात्रै प्रावधान छ । मृत्यु कसरी भयो यकीन हुन सकेन । मृत्युको कारण थाहा नभई बिमा रकम पाइन्छ की पाइदैन यसै भन्न मिल्दैन । काम गर्ने अवधि भित्र (duty hour) मा मृत...
प्रश्न : इजरायल सरकरले इजरायलका लागि रोजगारी खुलाएको छ यो महिलाका लागि मात्रै हो कि पुरुषले पनि आवेदन दिन पाउछ ? कुन कुन तहमा आवेदन दिन पाउछ र आवेदनका लागि कुन कुन प्रक्रिया रहेको छ, कहिले सम्म आवेदन दिन पाईन्छ, आवेदका लागि कुन कुन कुरा चाहिन्छ ? उत्तर : गोविन्द मणी भुर्तेल, प्रवक्ता, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका - नेपाल सरकार र इजरायली सरकार बिच भएको सम्झौता बमोजीम केयर गिभरमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । दक्षिण कोरिया जसरी नै नेपाल सरकारले नै पठाउछ । यो महिला र पुरुष दुबैको लागि हो । मह...
प्रश्न : मैले १५ महिने मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषय पढेको छु । अहिले पोलिक्लिनिकमा काम गरिरहेको छु । मेरो पढाइको विषयलाई लिएर म विदेश जान चाहन्छु । विदेशमा मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषय पढेकाहरुको माग हुन्छ कि हुन्न ? उत्तर : बलबहादुर तामाङ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी - खाडी मुलुकमा बिभिन्न हस्पिटलहरुमा दक्ष कामदारहरु जस्तै ल्याब टेक्निसियनको माग भइरहेको हुन्छ । मान्यता प्राप्त मेनपावरहरुले लिने अन्तरवार्ता पास गरेर जान सक्नुहुन्छ । विदेशमा प्रविधिहरु नयाँ हुन सक्छन । यहाँको भन्दा फरक । ...
म सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि जान सक्छु ?
प्रश्न : म वैदेशिक रोजगारी अन्तरगत सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न जान चाहन्छु । मेरो उचाई ५ फिट पाँच ईन्च छ र अंग्रेजीमा इन्टरमिडियट गरेको छु । के म सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि जान सक्छु ? यदि सक्छु भने कुन कुन देशमा जान सक्छु ? र यदि सक्दिन भने अन्य के काम गर्न जाँदा उपलब्धि मुलक हुन्छ होला ? उत्तर : कर्ण कटुवाल, सञ्चालक, ब्लुस्काई ईन्टरनेसनल प्रा. ली. - तपाईंको सेक्युरिटी गार्डका लागि चाहिने उचाई मिल्छ । पढाई पनि मिल्छ । तर तपाईं संग अनुभव छैन भने, तपाईंले ट्...
प्रश्न : मैले डिप्लोमा इन ईलेक्टीकल ईन्जीनीएरीङ पढेको छु । म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहान्छु । कस्तो काममा जादा राम्रो होला ? उत्तर : राजेन्द्र भण्डारी, सचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - तपाईंले इन्जिनिएरिङ सम्बन्धि काममै जादा राम्रो हुन्छ । त्यसमा तपाईंको कामको अनुभव पनि भए झनै राम्रो हुन्छ, राम्रो तलब सुबिधा पाउनु हुनेछ । खाडी मुलुकबाट उच्च दक्ष कामदारको धेरै माग आइराको हुन्छ । तपाईंले आफू सुहाउदो पद हेरेर अप्लाइ गर्दा हुन्छ ।...
प्रश्न : केही समय अगाडी नेपाल सरकार र म्यानपावरबिच भएको मलेसिया लगायत खाडी राष्ट्रमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको सम्झौता केवल सम्झौतामै सिमितभएको देखिन्छ । जबकी त्यो भन्दा अगाडी जति पैसा म्यानपावरमा तिरिन्थ्यो अहिलेको अवस्था पनि जस्ताको त्यस्तै छ । म आफै पनि कुवेतको भिसाको प्रतिक्षामा छु । डेढलाख लगानी गर्नु पर्छ भनेर म्यानपावर कम्पनीले भनीराखेको छ । फ्रिभिसा फ्रिटिकटको नियम लागु भैसकेपछि पनि किन यत्रो लगानी भनेर सोध्दा लागु भई नसकेको र परिक्षणमा रहेको भनेर जवाफ दिन्छन । सरकारले किन ...
प्रश्न : मैले एकजना दलाललाई गएको भदौमा विदेश जानका लागि पासपोर्ट दिएको थिएँ । दलालले अहिले १ लाख १५ हजार मागिरहेको छ । मैले सुनेको १५ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्नुपर्दैन । म समस्यामा परें । म के गरुँ ? उत्तर : गोविन्द मणी भुर्तेल, प्रवक्ता, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - जानी जानी आफ्नो पासर्पोट जस्तो कुरा, घरको सम्पती जस्तो कुरा दलाललाई दिनु भएन । यो तपाईंको गल्ती हो । तपाईंले पासर्पोट र्फीता लीन नजीकको प्रहरी वा जील्ला प्रसासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुहोस् । तपाईंको पासर्पोट फीर्ता हुन्छ । ...
प्रश्न : म काठमाडौंको फ्युजन म्यानपावरबाट मलेसिया जाँदैछु । म्यानपावरले नै श्रम स्वीकृति लिइदिन्छ भन्छन । यो के हो मैले बुझ्न सकिन । उत्तर : तपाईंले बुझ्नु भएको सही हो । तपाईंले म्यापावरबाट नै विदेश जाने प्रक्रिया गर्नुभएको भए पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति म्यानपावर कम्पनीले नै लिइदिन्छन । तर मलेसिया जान २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि तिर्नुपर्दैन ।
प्रश्न : नमस्कार ! म पाँच महिना अगाडि वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया गएको थिए र मलाई मुटुको समस्या देखाएर फिर्ता पठाईयो र नेपालमा आएर गंगालाल अस्पतालमा मुटुको चेक गराउँदा सबै रिर्पोट सामान्य देखियो । म फेरी रोजगारका लागि साउदि अरव जान चाहान्छु । त्यहि पासपोर्टमा जान पाउँछु की पाउँदिन ? यदि पाउँछु भने मैले अन्य के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ? उत्तर : सुरेश पौडेल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ – अधिकांस मलेसियन कम्पनीले कामदार मन परेन, काम गर्न सकेन, राजनिति ...